Vectr: Beddelka Bilaashka ah ee Adobe Illustrator | Martech Zone
Vectr waa lacag la'aan oo aad u dareen leh Tafatiraha sawirada vector barnaamijka loogu talagalay webka iyo desktop-ka. Vectr waxay leedahay qalooca waxbarasho oo aad u hooseeya taasoo ka dhigeysa naqshadeynta garaafka qof walba inuu heli karo. Vectr wuxuu sii ahaanayaa mid xor ah weligiis iyadoo aan ku xirneyn xarig.
Waa maxay farqiga u dhexeeya Vector iyo Raster Graphics?
Vector-ku-saleysan sawirada waxaa laga sameeyaa xariiqyo iyo wadiiqooyin si loo abuuro sawir. Waxay leeyihiin bar bilow, dhibic dhammaad, iyo khadad u dhexeeya. Waxay kaloo abuuri karaan walxo la buuxiyey. Faa'iidada muuqaalka vector-ka ayaa ah in dib loo qiyaasi karo laakiin wali la ilaaliyo sharafta sheyga asalka ah. Ku saleysan Raster sawirradu waxay ka kooban yihiin pixels iskudhafyo gaar ah. Markaad ka balaadhiso sawirka ka soo horjeedka naqshaddiisa asalka ah, pixels-yada ayaa qaloocan.
Ka fikir saddexagalka iyo sawir. Saddexagalka wuxuu yeelan karaa 3 dhibcood, xarriiqyo u dhexeeya, waxaana lagu buuxin karaa midab. Markaad u ballaadhiso saddexagalka laba jeer cabbirkiisa, waxaad si fudud u kala durkineysaa saddexda dhibcood. Ma jiro wax dhalanrog haba yaraatee. Hada balaadhi sawirka qofka laba jeer cabirkiisa. Waxaad ogaan doontaa in sawirka uu noqon doono mid cakiran oo qalloocan maadaama xoogaa midabka la ballaariyay si loo daboolo pixels badan
Tani waa sababta jaantusyada iyo astaamaha u baahan in si wax ku ool ah loo qiyaaso ay badanaa ku saleeyaan dulinka. Waana sababta aan inta badan u dooneyno sawirro baaxad weyn leh oo ku saleysan fekerka marka aan ka shaqeyneyno shabakadda… si markaa loo yareeyo cabbirka meesha ay ku yar tahay dhalanroggu.
Vectr waxaa laga heli karaa khadka tooska ah ama waxaad kala soo bixi kartaa arjiga OSX, Windows, Chromebook, ama Linux. Waxay leeyihiin set hodan ah muuqaalada khariidadooda taas oo si aad u wanaagsan uga dhigi karta bedel la heli karo Adobe Illustrator, oo ay ku jiraan noocyo gundhig ah oo lagu dhex dari karo tifaftireyaasha internetka.
Isku day Vectr Hada!
Tags: khariidad yarraajoraster ka soo horjeedka vectorvectorTafatiraha sawirada vectorvector iyo rastertifaftiraha naqshadeynta vector-ku-saleysanfaleebo